Ciidamada dalkaan Iswiidhan ee ku sugan dalka Afgaanistaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
M och S avgörande Afghanistanmöte
Ciidamada dalkaan Iswiidhan ee ku sugan dalka Afgaanistaan
Publicerat tisdag 26 oktober 2010 kl 18.30
Ciidamada Dalkaan Iswiidhan kuwo kamida
Raysalwasaraha dalkaan Iswiidhan Fredrik Reinfeldt iyo hogaamiyaha xisbiga sooshaldemoqoraadiga Mona Sahlin ayaa sii wadey wada hadlkii ay ku baadida doona hayeen heshiis meel dhexe la isugu yimaado oo ku wajahan sidii laga geeli lahaa ciidamada Iswiidhan ee ku sugan dalka Afgaanistaan.
Mona Sahlin hogaamiyaha xisbiga sooshaldemoqoraadiga, ayaa sheegtay wada hadalkii ay galeen maantey inuu ahaa mid rajo ka muuqato ayna tahay xaalad wanaagsan marhadii ay rajo laantii meesha ka baxday. Sidoo kale ayuu Raysalwasaare Fredrik Reinfeldt sheegay in labda xisbi ay gaareen wada hadal wanaagsan oo lagu han ween yahay ineey qortaan heshiis waxa ku oola. Labadan Masuul ayaa ka gaabsadey ineey ka faaloodaan cida kala qeeyb gashey kulankaan ay maatay yeesheen.
Heshiiskaan ay hadalka hayaan Labda hogaamiye waa Mona Sahlin iyo Fredrik Reinfeldt, ayuu ku tilmaamey hogaamiyaha xisbiga bidixda Lars Ohly , midaan miro dhali karin hadii aysan ka qeeyb qaadan dhammaan saddexda xisbi ee casaan /cagaarku.
Dhinaca kale hogaamiyaha Xisbiga Doogga Peter Eriksson, ayaa sheegay inuusa ka ka hadleenin heshiiskan lahadala hayo ilaa iyo dawladu soogaarsiiso qoraal uu ku cad yahay sida uu u egyahay.